VIDEO: Maxaa kajira in duqii hore ee Galkacyo Nabadoon Yaasiin Cabdisamad kamid ahaa Alshabab.
July 21, 2021 Xuseen 2
Puntlandtimes (Muqdisho)-Guddoomiyihii hore ee degmada Galkacyo kana mid ah waxgaradka Puntland Nabadoon Yaasiin Cabdisamad ayaa ka hadlay warar been abuur ah oo uu sheegay in laga faafiyey mudadii uu ka maqnaa magaalada Galkacyo.
Nabadoon Yaasiin Cabdisamad oo ka hadlayey dagaalka lagula jiro Alshabaab ayaa sheegay in mudadii uu maqnaa lagu shaabadeeyey inuu kamid ahaa dadka la shaqeeya malayshiyaadka Alshabaab uuna isaga cararay magaalada Galkacyo, isagoona arrintaasi ku sheegay wax laga xumaado iyo dacaayad aan sal iyo raad toonna lahayn.
Yaasin Cabdisamad ayaa bogaadiyey howlgalka Alshabaab looga sifaynayo gobolka Mudug, wuxuuna shacabka ugu baaqay inaysan guryaha kujirin ee ay bogaadiyaan howlgallada socda lana shaqeeyaan dowladda iyo ciidanka ammaanka ee gobolkaasi.
Waxa uu caddeeyey inuu diyaar u yahay inuu af iyo adinba kula dagaalami doono malayshiyaadka Alshabaab, loona baahan yahay in shacabku difaacaan mas’uuliyiintooda una jawaabaan ragga ka soo hadlaya Koonfurta Soomaaliya oo uu sheegay inay yihiin Alshabaab garka soo guduudsaday oo ku dhexjira nabadoonada iyo waxgaradka Soomaaliyeed.
guul yaasiin gacanta isqabsada puntland ayad lo baahanye cid uma baahna laba badood ayaad haysta albaabkab somalia ayaa tahay cunqabtay ayaad sarin wixii xumaan wada guul puntlan shacbkeeda iyo dooladeedab colaada laguu haya waa iskudubnimada kii laga shakiyo beeraha halagu fasho boowe bargaal geey boqol geed oo timira ha abuuro ila shansono markay timirtu dhashano haduu dad dilay markaas haladilo
guul yaasiin gacanta isqabsada puntland ayad lo baahanye cid uma baahna laba badood ayaad haysta albaabkab somalia ayaa tahay cunqabtay ayaad sarin wixii xumaan wada guul puntlan shacbkeeda iyo dooladeedab colaada laguu haya waa iskudubnimada kii laga shakiyo beeraha halagu fasho boowe bargaal geey boqol geed oo timira ha abuuro ila shansono markay timirtu dhashano haduu dad dilay markaas haladilo guulayso nur yare guul guul